C&S Biodent မှ Basic Ortho သင်တန်
May 2, 2016 January 20, 2020
မြန်မာ့ ပြည်တွင် လူနာများ အတွက် Basic Orthodontic Care သည် များစွာ လိုနေသေး လျက်ရှိသည် ကို တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် dental GP များကို သက်သက်သာသာ ဖြင့် များများ သင်တန်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ယင်း Demand ကို… Read More »C&S Biodent မှ Basic Ortho သင်တန်
Estelite Posterior (4.2g)
တန်လွန်းလို့ပစ္စည်း ခဏ ခဏ ကုန်သွားလို့ ပြေးသာဝယ်ထားရမယ့် Composite ၂ မျိုးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ… Estelite Posterior (4.2g) (Amalgam အစားထိုးလို့တောင်ပြောစမှတ်ပြုရအောင်ကောင်းတယ်) 31000 MMK နဲ့ သူ့ထက်တန်တာတောင် သူ့လောက်မတန် Estelite Alpha (3.8g *4 syrings) 90000 MMK… Read More »Estelite Posterior (4.2g)
Orthodontics Advanced Course (Theory and Hands-on)
Professor Patil ၏ Advanced Orthodontics Lecture and Hands-on Course အား 15,16 Feb 2020 တွင် C&S Biodent Co.,Ltd (Yangon)တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။ စနစ်တကျဖြင့် သေချာကြီးကြပ်ပြီး Hands-on Training လုပ်မည့်အတွက် လူဦးရေ… Read More »Orthodontics Advanced Course (Theory and Hands-on)
Condimentum fermentum bibendum
Consectetur adipiscing elit. Aenean condimentum mi nec erat fringilla faucibus. Proin molestie orci et efficitur posuere. Praesent euismod accumsan nulla aliquam elementum. Aliquam erat volutpat.… Read More »Condimentum fermentum bibendum
Mon - 9:00 - 21:00
Tue - 9:00 - 21:00
Wed - 9:00 - 21.00
Turs - 9:00 - 21:00
Fri - 9:00 - 21:00
Sat - 9:00 - 21:00
Sun - 16:00 - 21:00
No.127 , Second Floor , Bargayar Road , Sanchaung Township, Yangon, Myanmar
Email : info@cnsbiodent.com
Copyright © 2019 C&S Biodent Co.Ltd Powered by Punnami